Hotel SUPER Mbara Igwe 65kW Sistem na 216 PV pan na Batrị ndabere - Kimroy Bailey Group
The Hotel Mega Solar System e mere maka naanị maka ụlọ oriri nwere ihe karịrị iri abụọ na ise. Ọnụ ego ngwugwu gụnyere ihe niile achọrọ na ntinye ọkọlọtọ Hotel Mega Solar System n'ebe ọ bụla n'ụwa *. Otu Kimroy Bailey Group enyochaala ụlọ ọrụ 25 na ụlọ oriri na ọ gloụ 600ụ n'ụwa niile ma anyị echepụtala ụzọ kachasị edozi anyanwụ iji mee ka akụrụngwa na - enweta ike kachasị maka otu ụlọ oriri na ọ typicalụ .ụ. Ulo nkwari akụ Mega Solar 45kW nwere 144 Plọg PV na nkwado batrị nwere ike ike 25 Igwe ngbanye ikuku na mgbakwunye 7MWh / ọnwa, ụlọ ebe a na-asa ụlọ na-eri 1 MWh / ọnwa na Ice / Vending igwe na ngwa ụlọ ndị ọzọ na-eri ego ngụkọta. 1 MWh kwa ọnwa. Ndi Kimroy Bailey Group haziri ngwugwu a na mgbịrịgba na iyi niile iji kpochapụ ụgwọ ụlọ nkwari akụ 1 nke na-ekpuchi oriri kwa ọnwa ruo 25 MWh kwa ọnwa n'oge oge kachasị elu. Usoro eriri eriri a na-abịa na Kimroy Bailey Group Batrị ndabere iji wepụta ihe dị oke egwu ma ọ bụrụ na mwepụ okporo.
SKU: RE-CK-Res01-1-1 Categories: Ngwa zuru ezu, Renewable Energy, Ngwaahịa Ike Mmeghari ohuru Tag: Grid Tie Solar
Anyị emeela njem ụwa ma anyị nọrọ n'ụlọ nkwari akụ gị. Mgbe ndị otu anyị na ndị ọbịa gị ndị ọzọ na-anụ ụtọ nkasi obi nke ụlọ ikuku oyi, mmiri ọkụ ngwa ngwa, akwa nhicha mmiri, bọket ice na ọtụtụ ndị ọzọ; naanị ndị otu mana maara ụgwọ eletrik n’azụ nkasi obi ndị ọbịa gị ọ bụla. Otu Kimroy Bailey Group enyochaala ụlọ ọrụ karịrị narị isii na ụwa niile ma nweta echiche pụrụ iche maka ọnụọgụ ndị na-awụ akpata oyi n'ahụ. Ego eletriki bụ ego kachasị akwụ ụgwọ maka akwụkwọ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị a. Nke ka mkpa, ọnụ ahịa ọkụ eletrik na-egbochi uto nke ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ na-arịwanye elu na ọnụ ahịa na-eme ka ọ sie ike ịme amụma amụma mmefu ogologo oge. Otu Kimroy Bailey Group ejirila nlezianya wepụta ngwugwu ike atọ nke anyanwụ iji kpochapụ ụgwọ ọkụ eletrik kwa ọnwa na ọnụahịa ngalaba ndekọ ahụ ga-ahụ n'anya nke ukwuu.
Hotel SUPER Mbara Igwe 65kW Sistem na 216 PV pan na Batrị ndabere dị mma maka ụlọ nkwari akụ 25 na 50. Akụkụ kachasị mma bụ na sistemụ niile anyị dị modular ma gbasaa ngwa ngwa. Otu ngwungwu ngwongwo nwere ike 25-50 ụlọ nkwari akụ ụlọ ọkọlọtọ, akụrụngwa ebe a na-asa ákwà na igwe ice / na-ere ihe n'ofe ụlọ ọrụ. Nweta nkwanye ụgwọ ozugbo na ụgwọ ọkụ eletrik gị dị elu ma ọ bụ kpochapụ ya niile. Ahụmịhe ụlọ ebe 50 anyị nwere ahụmịhe karịa 60% mbelata ụgwọ ọkụ eletrik mgbe ịwụsịrị ngwugwu Igwe Igwe Solar.
Hotellọ oriri na nkwari akụ Hotel SUPER Solar 65kW na 216 PV pan na Batrị ndabere gụnyere:
216 Mbara Igwe na-acha uhie uhie na-enye ihe karịrị 65 kW nke ike n'okpuru ọnọdụ kachasị elu
Anyanwụ Edge Inverters nwere ike jikọtara ọnụ karịa 70kW
Achọrọ HEYClip Sunrunner Cable Clip & Nhọrọ D Racks Module na ala
Mbido USB: Water proof Strain Relief, UL Cable, MC4, 10AWG USB Ext ndọtị
Anyanwụ Combiner Box
Batrị 16 Crown / dakọtara na 48VDC Bank Batrị na ịchekwa 860Ah nke Ike na a Nchịkọta ike nke ~ 82 kWh
Echichi ụlọ dị n'elu ụlọ ọkọlọtọ zuru ụwa ọnụ
Agụnyere Mbupu Globalwa Ọhụrụ gụnyere *
Thelọ oriri na nkwari akụ Hotel SUPER Solar 65kW nwere 216 PV pan na Batrị ndabere bụ usoro zuru oke nke na-enye mbelata ngwa ngwa na ụgwọ ọnwa kwa ọnwa.
Ọ bụ oge iji:
Wepu ụgwọ ọkụ eletrik dị elu na họtel gị
Tụgharịa elu ụlọ gị, ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ ebe a na-egwu mmiri ka ọ bụrụ osisi na-eme ka Solar na-emepụta ọmarịcha osisi
Jiri ego nkwụghachi ọsọ ọsọ wepụta afọ iri atọ na mmiri anyanwụ, jikwa ego kachasị ego gị
Ihe ngwugwu Hotel Solar system a nwere ike
50 - 100 Hotel Room Conditioners (10 MWh / ọnwa)
2 Lalọ oriri na nkwari akụ Hotel (1.5 MWh / ọnwa)
Hotel Ice na Vendering Machines (1.5 MWh / ọnwa)
Ihe ngwugwu a nwekwara ike ike ihe ndị a
Ọkụ nkwari akụ: n'èzí, paseeji, nnukwu ọnụ ụlọ na ebe igwu mmiri
Roomlọ nkwari akụ obere ngwa
Nri ụtụtụ: Toaster, Microwave, Onye mebere Waffle, kọfị kọfị
Ihe ngwugwu a gụnyere batrị 32 na-echekwa 860aH. Enwere ike iji nke a gbanye ihe ndị dị mkpa dịka:
Sistemụ onyunyo nkwari akụ
Kọmputa n'ihu na akụrụngwa ụlọ ọrụ
Ngwongwo ọkụ na akụrụngwa dị oke egwu
Agụmakwụkwọ Agụmakwụkwọ maka Hotel SUPER Mbara Igwe 65kW Sistem na 216 PV pan na Batrị ndabere
Purchasezụ a gụnyekwara ọgbaghara ọnwa atọ maka Mbara Igwe Igwe Ntanetị nke Anyanwụ.
Agụmakwụkwọ Ndụmọdụ maka Hotel SUPER Mbara Igwe 65kW Sistem na 216 PV pan na Batrị ndabere
1 nyochaa maka Hotel SUPER Mbara Igwe 65kW Sistem na 216 PV pan na Batrị ndabere
Hotel SUPER Solar 65kW Sistem na 216 PV paneli na Batrị ndabere dị mma maka ụlọ nkwari akụ ime ụlọ 25 na 50. Akụkụ kacha mma bụ na sistemụ niile anyị bara ụba ma gbasaa ngwa ngwa. Otu ngwungwu ngwongwo nwere ike 25-50 ụlọ nkwari akụ ụlọ ọkọlọtọ, akụrụngwa ebe a na-asa ákwà na igwe ice / na-ere ihe n'ofe ụlọ ọrụ. Nweta nkwanye ụgwọ ozugbo na ụgwọ ọkụ eletrik gị dị elu ma ọ bụ kpochapụ ya niile. Ahụmịhe ụlọ ebe 50 anyị nwere ahụmịhe karịa 60% mbelata ụgwọ ọkụ eletrik mgbe ịwụsịrị ngwugwu Igwe Igwe Solar.